Garre (), sidoo kale loo yaqaano Karre, waa qabiil ka tirsan Beelaha Digil iyo mirifle, ee Dadka Soomaalida. Beesha Garre waxaa deegaan ku yihiin Soomaaliya, Kiinya iyo deegaano ka mid ah Soomaali Galbeed wadanka Itoobiya iyo tashaad .
Garre waa beel ka mid ah beelaha Soomaaliyeed waana 2 qaybood oo kala ah Tuff iyo quranyow . Beesha Garre waxay degaaan degaano badan gudaha somaliya iyo dibadiisa ah sida Afgooye, Tooratoorow, Aw-dheegle, Qoryooley, Farsooley, Bur-kod, Buullo-Fullaay, Ceel-Waaq gobolka Somalida ee Kenya sida (moyale) (mandheera) (takaba) iyo gobalka liban wadanka Itoobiya.
Beeshaan waxey leedahay lahjad la dhoho Af-Garre. Qabiilka Garre wuxuu ka mid yahay, qabiilada tiradoodu ay aad u badantahay Somali ahaan, waa qabiilka kaliya ee dega ila iyo dalka Chad,Kounfurta Libya, iyo Qeyb ka mid ah Sudan. waxay dadka intiisa badan isku qaldaan isbaheysiga Digil oo ay ku jiraan qabaa'il badan iyo Isirka qowmiyadda Garre. Digil ma ahan dad asal ahaan hal meel ka soo wada jeeda balse waa isbaheysi xoogan oo soo jireen ah, taasi waxay muujineysaa ilbaxnimada iyo xadaaradda ay leeyihiin umadda Soomaliyeed. Garre isir ahaan waa Garre Samale waxa xusid mudan in garre lasimanyahay Dir Darod iyo raxanweyn , Hawiye garre wuxuu waalid amad uugu beegan yahay dhamaan ilmo samaale
Garre (Gharri) wuxuu dhalley laba wil.Mid waxaa la dhahiin jiray tuf midka kale waxaa la dhihi jirey Maxaamed. Maxaamed waa wilka uu wayn. Ilmaha Garre. Maxaamed marku dhaley wilka layiirado quraan aayu dhintay. quraan waxaa soo koriyey adderkiisa Tuf. Quraan ;markuu waynadey wuuxu gursadey gebedhii adeerkiisa Mako Tuf. Quraan wuuxu dhaley laba will oo layiirado Assarre iyo Furkushe. Tuf wuxuu dhalley laba wiil oo la kala yiraahdo  Cali iyo Adolle
Garre yaa dhalay?  Garre waxaa dhaley Samalle.
Gharri ;Samale Gharri samle laba qole ayuu ukala baxa Gharr dheera samale 4 qole ayuu ukala baxa Irir Samale Mayle Samale YabuurSamale Maqarre Samale Xammarre samale Xarirre samale Gharri Somali (Gharri Konfur)
4. farmuuq  birkaaye
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Garre&oldid=173172"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 10 Maarso 2018, marka ee eheed 08:08.